Real Youth Initiate
English ‎(en)‎ ဗမာစာ ‎(my)‎
Skip Follow Your Dreams
Real Youth Initiate is committed to providing fundamental education accessible to students of all races, genders and religions through our projects: “Real School Real Youth" and "Real Money Real Youth". Real Youth Initiate is not-for-profitasocial enterprise, and we are committed to ending the inequality in education for underserved people.
Real Money Real Youth Program ဆိုတာဘာလဲ?
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါနှင့် စီးပွါးရေးကျဆင်းမှု၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ရင်ဆိုင်ရမည့် အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာ၊တဦးချင်းဝင်ငွေကျဆင်းမှုနှင့် ငွေဖောင်းပွမှုတို့ကြောင့် လူမှုစီးပွါးရေး အဆင်မပြေမှုဒဏ်ကို ခံစားနေရသည့် သန်းနှင့်ချီသော လူငယ်များအတွက် တွေ့ကြုံလာရသည့် အကျပ်အတည်းများကို ...
Real Youth Initiate is not-for-profitasocial enterprise, and we are committed to ending the inequality in education for underserved people. Real Youth Initiate is committed to providing fundamental education accessible to students of all races, genders and religions through our projects: “Real School Real Youth" and "Real Money Real Youth".
Skip "သင်နှင့်ထိုက်တန်သော ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို အနာဂါတ်မှာ သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး"
"သင်နှင့်ထိုက်တန်သော ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို အနာဂါတ်မှာ သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး"
+959 782 616 026
Real Youth Initiative ဟာ မတူညီတဲ့ အသက်အရွယ်၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးက လူငယ်တွေနဲ့ ပညာရေးနယ်ပယ်မှ အသိပညာရှင် အတက်ပညာရှင်များ အတူတကွ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ တူညီတဲ့ အသိ၊ အိမ်မက်နဲ့ ယုံကြည်ချက်တခု ရှိနေကြပါတယ်။
© RYIC. Designed by QWERTY Innovation Co., Ltd..